Ciidamadii lagu qabtay dagaalkii Beled-Xaawo oo la geeyey Dagmada Doolow ee gobola Gedo. | Weheliye Online
Ciidamadii lagu qabtay dagaalkii Beled-Xaawo oo la geeyey Dagmada Doolow ee gobola Gedo.
Dowladda Soomalaiya ayaa la sheegay in xalay xilli dambe degmada Doolow ee gobolka Gedo geysay ciidamadii maamulka Jubbland ee dhawaan lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay magaalada Beled-Xaawo, kaas oo u dhaxeeyey ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka.
Goobjoogayaal ku sugan degmada Doolow ayaa KNN u sheegay in gaadiidka waaweyn ee Soomaalidu u taqaano Waaraadka lagu daabulay ciidamada, isla markaana lagu xareeyay xero ciidan oo ku taalla degaan u dhow Doolow oo lagu magacaabo Buundo-Garas.
Degmada Beled-Xaawo oo ciidankan lagu qabtay maalin ka hor waxaa ka dhacay dagaal dad badan ay ku dhinteen oo halkaas ku dhexmaray ciidamo la sheegay inay ka amar qaataan wasiirka amniga Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee dhawaan la geeyey Gedo.
Previous articleDEG DEG: Dowlada Fadaraalka Soomaaliya oo ku gacan sayrtay warbixintii guddiga xaqiiqa raadinta xuduuda dowladaha Somaliya iyo Kenya.
Next articleAkhriso:-Awoodaha Madaxweynaha ee aan Dastuurka ku Qornayn!.